Guryaha waxtarka leh | December 2019
Ugu Weyn Ee Guryaha waxtarka leh
Bertoletija waa cilad ku jirta dhirta dhirta, kuwaas oo inta badan loo qaybiyo Koonfurta Ameerika. Nooca kaliya ee cirfadani waa buste dheer, kaas oo loo yaqaano adduunka oo idil adoo magaca "Brazil nut". Midhaha geedka tani waa mid aad u ballaaran oo cabbirka sida lowska. Inkasta oo aad wacdo badeecadahan lowska waa mid gebi ahaanba sax ah, sababta oo ah botaniska waxaa lagu magacaabaa hadhuudh.
Sidee buufiyuhu u yahay faa'iido leh
Geedka nolosha dhab ahaantii way jiraan. Tani ma aha mid fantastik ah oo lagu amaanay qorayaasha iyo farshaxanka, ma ahan sawir nool oo ka soo jeeda qoraallada kitaabka ah, laakiin pistachios si fiican loo yaqaan. Kumanaan sanadood oo kuwan dhirta kulaylaha ah waxay abuurtay bini-aadam qiimo leh, taas oo si isku dhaf ah u dhajiso dhadhan fiican iyo sifooyin faa'iido leh.
Muxuu Nusbeebkani ka kooban yahay iyo wuxuu faa'iido u leeyahay haweenka
Waxaa laga yaabaa in badan oo naga mid ah ay naqaanaan nutska Brazil - cuntadani waxaa laga helaa meel kasta, maadaama ay ka heshay adeegsigeeda dhammaanba goobaha cayayaanka. Waxaa loo isticmaali karaa kali ahaan ama u noqon karaa dhammaystiran oo buuxda dhammaan noocyada suugada saliidda ah iyo macaan. Si kastaba ha noqotee, dad badani ma oga in, marka laga reebo sifooyinka qiimaha leh ee sifududaha cuntada, lowskaasi wuxuu leeyahay farabadan oo dhan oo waxtar u leh jirka haweenka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Guryaha waxtarka leh 2019